तोहोकु क्षेत्र!6प्रान्तहरूमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
गर्मी मा Oirase धारा, Aomori प्रान्त, जापान Shutterstock
जापानको तोहोकु क्षेत्रमा जाडोमा चिसो बढी हुन्छ, हिउँ अक्सर पर्दछ। व्यक्तिहरूले यस वातावरणमा बाँच्न धैर्यपूर्वक विभिन्न तरिकाहरू बनाएका छन्। यदि तपाईं तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तोहोकु क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन महसुस गर्नुहुनेछ। तोहोकु क्षेत्रमा सुन्दर दृश्य जब सुन्दर चेरी फूल को फूल गर्न शुरू भयो अद्भुत छ। परम्परागत चाडहरू जुन छोटो गर्मी र शरद पातहरूमा हुने ठाउँहरू पनि हेर्न लायकको हुन्छन्। तपाईं तोहोकुमा पनि किन यात्रा गर्नुहुन्न?
तोहोकु क्षेत्रको रूपरेखा
तोहोकु जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद .तुमा
यहाँ धेरै स्थानीय खाना छन्
Tohoku मा स्वागत छ!
शिराकामी पहाडी फराकिलो रातो, सुन्तला र एमोरी तोहोकु जापानमा सुनहरी पत्ते सहित रंगीन शरद treesतु रूखहरू।
तोहोकुको नक्शा = शटरस्टक
Hokkaido सँग तुलना गर्न सकिने अचम्मको भूमि
हालसालै होक्काइडोको लोकप्रियता विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा बृद्धि भएको छ। त्यो राम्रो छ। यसको विपरित, तोहोकु क्षेत्रले धेरै ध्यान पाएको छैन। मलाई यसको लागि थोरै दु: ख लाग्छ।
तोहोकु क्षेत्रमा तपाईले जाडो र आश्चर्यजनक सुन्दर प्रकृतिको अद्भुत दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, जस्तै होक्काइडो।
उही समयमा, तोहोकु क्षेत्रमा, पुरानो दिनको पारंपरिक जीवन र राम्रो काठको भवनहरू बाँकी छन्। होक्काइडोमा, त्यस्तो जीवित संस्कृतिको आनन्द लिन गाह्रो छ जबसम्म तपाईं स्वदेशी आइनु बस्तीमा जानुहुन्न।
म धेरै मानिसहरूलाई तोहोकु क्षेत्रको सम्भव भएसम्मको आश्चर्यको बारे जान्न चाहन्छु। यस जिल्लामा, तपाईले हक्काइडोसँग तुलना गर्ने उजाडस्थानमा मानिसहरू द्वारा खेती गरिएको समृद्ध जीवन संस्कृति पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
कृपया कठोर वातावरणमा जीवन संस्कृति महसुस गर्नुहोस्
तोहोकुमा यात्रा गर्दा कृपया यस क्षेत्रमा जाडोको कल्पना गर्नुहोस्। किनकि त्यहाँ कडा हिउँद छ, वसन्त चम्किन्छ। मानिसहरूले गर्मीमा चाडहरू रमाइलो मान्दछन्। र शरद पातहरू गहिरो महसुस हुन्छन्।
तोहोकु क्षेत्रका मानिसहरु धेरै धैर्यवान छन्, किनकि उनीहरु कडा वातावरणमा बस्छन्। तिनीहरूले बुद्धिमत्ता लिन्छन् तिनीहरूका पुर्खाहरूबाट बाँच्न र पारम्परिक जीवन शैली र संस्कृतिको रक्षा गरेर। त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, तपाईं एक धेरै गहिरो यात्राको अनुभव गर्नुहुनेछ।
तोहोकु क्षेत्रमा मौसम र मौसम
हिमकोडा, अओमोरी, जापानमा फ्रस्ट कवरेड रूखहरूको परिदृश्य = शटरस्टक
तोहोकु क्षेत्रको मौसम जापान सागर साइड र प्रशान्त क्षेत्रमा फरक छ। तोहोकु क्षेत्रको बीचमा, ओउ पर्वत श्रृंखलाहरू उत्तर र दक्षिणमा जोडिएका छन्। यो ओउ पर्वत श्रृंखलाको पश्चिम तर्फ जापान सागर छेउ क्षेत्र र पूर्व पक्षमा प्रशान्त पक्ष क्षेत्र बीच भिन्न छ।
जापानको सागरको छेउमा रहेको क्षेत्रमा, हरेक वर्ष जाडोमा धेरै हिउँ पर्दछ। यो किनभने जापानको सागरबाट आउने चिसो हावा Ou माउन्टेन रेन्जले रोकिनेछ र हिम पतन गराउनेछ। कहिलेकाँही हिउँ पहाड क्षेत्रमा भय falls्कर वर्षा हुन्छ। अर्कोतर्फ, हावा ओउ माउन्टेन रेन्जको पूर्वी भागमा तुलनात्मक रूपमा सुक्खा छ। तापक्रम कम हुँदा हिउँ पर्न सक्छ, तर जापान सागर साइडको तुलनामा त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्।
यद्यपि तोहोकु क्षेत्रमा ओ पहाडहरू बाहेक थुप्रै पर्वतहरू छन्। त्यसकारण, क्षेत्र क्षेत्रको आधारमा मौसम फरक हुन्छ।
वसन्त autतु र शरद Toतुमा तोहोकु क्षेत्र टोकियो र क्योटो आदि भन्दा थोरै चिसो छ। यद्यपि ग्रीष्म itतु जति तातो हुने छ। तोहोकु क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै बेसिनहरू छन्, र दिनको उच्चतम तापक्रम यी बेसिनहरूमा विशेष गरी उच्च छ।
कोमाची सुपर एक्सप्रेस Shinkansen E6 श्रृंखला। अकिता शिन्कानसेन लाइनहरू = शटरस्टकका लागि जेआर पूर्वद्वारा संचालित
तोहोकु क्षेत्र यति विस्तृत छ कि शहरहरू बीच जानका लागि यसले केहि समय लिन सक्दछ। साधारणतया, तपाई गन्तव्यको नजिकै एयरपोर्टमा जानु पर्छ र त्यहाँबाट बस वा ट्रेन लिनुपर्दछ गन्तव्यको लागि।
जे होस्, तोहोकु क्षेत्रमा, जेआर तोहोकु शिन्कानसेन संचालित छ। यो बुलेट ट्रेन टोकियो स्टेशनबाट शिन-हाकोडाटे-होकुटो स्टेशन दक्षिणी होक्काइडोमा फुकुशिमा स्टेशन, सेन्दै स्टेशन, मोरियोका स्टेशन, शिन अओमोरी स्टेशन र यस्तै हुँदै जान्छ। Yamagata, Yamagata Shinkansen फुकुशिमा स्टेशनबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं Akita Shinkansen को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ मोरियोका स्टेशन देखि अकिता जापान सागर छेउमा। यदि तपाईं यी Shinkansen रेखा को साथ जान चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नु पर्छ। यदि तपाईं बुलेट ट्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, यो लगभग २ घण्टा टोकियो देखि सेन्दै, तोहोकु क्षेत्रको मध्य शहर हो।
पर्यटन नाव र चेरी फूलहरू वा सकुराको पows्क्तिहरू हिउँले ढाकेको जाओ माउन्टेनको पृष्ठभूमिमा मियागी प्रान्तको शिरोशी नदीको किनारमा, जापान = शटरस्टक
तोहोकु क्षेत्रमा, मौसमहरू धेरै परिवर्तन हुन्छन्। जाडो लामो छ र यो साँच्चिकै चिसो छ। वसन्त टोकियो भन्दा पछि आउँछ। तोहोकु जिल्लामा जहाँ धेरै जंगली प्रकृति बाँकी छ, विभिन्न फूलहरू त्यस समयमा एकैचोटि खिलछन्। र गर्मी तातो तातो छ। शरद Inतुमा विशाल पहाडहरू सुन्दर र .्गका छन्।
यदि तपाइँ जाडोमा तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म जापान सागर छेउको क्षेत्र सिफारिस गर्दछु जहाँ हिउँ भारी बग्दछ, वा हिमाली क्षेत्रमा स्की रिसोर्ट्स।
जापानको सागरको छेउमा, योकोटे (अकिता प्रान्त) जहाँ परम्परागत शहर दृश्यहरू अवस्थित छन्, हिउँद दृश्य सुन्दर छ न्युटो ओन्सेन (अकिता प्रान्त), र जिन्जान ओन्सेन (यामगाता प्रान्त) जस्ता दर्शनीय स्थलहरू। क्षेत्र अद्भुत छ।
>> योकोटे को विवरणको लागि, कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
>> न्युटो ओन्सेन र जिन्जान ओन्सेनको विवरणहरूको लागि, कृपया यस लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्
हिमाली क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी जाओ स्की रिसोर्ट (यामगाता प्रान्त) विशेष रूपमा सिफारिस गरिन्छ।
>> जाओ को विवरणका लागि कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
तोहोकु क्षेत्रमा वसन्त हिउँ पग्लनको साथ सुरु हुन्छ। र चेरी फूलहरू टोकियो र क्योटो भन्दा पछि उम्रिनेछ। शहरी क्षेत्रहरूमा अप्रिलको बीचमा चेरि फूलहरू खिलछन्। यो पछि पहाडी क्षेत्रमा पनि छ।
जस्तो जाडो चिसो छ, यस क्षेत्रमा चेरी फूलहरू अझ सुन्दर देखिन्छन्। मेरो सिफारिश छ कि तपाईले चेरी फूलहरू विशेष गरी हिरोसाकी क्यासल (अओमोरी प्रान्त) र हानमियामा पार्क (फुकुशिमा प्रान्त) मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यी दर्शनीय स्थलहरूमा चेरी फूलहरू ठूला शहरहरू भन्दा धेरै प्रामाणिक छन्।
>> हीरोसाकी कासल र हन्याम्यामा पार्क को विवरणका लागि, कृपया यस लेखलाई हेर्नुहोस्
गर्मी मा तोहोकु
तोहोकु क्षेत्रमा, गर्मी अप्रत्याशित रूपमा तातो छ। विशेष गरी अकिता प्रान्त र यमगाता प्रान्त जस्तै बेसिनहरूमा, दिनको अधिकतम तापक्रम 35 XNUMX डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनु कुनै असामान्य कुरा होइन। यो बिन्दु होक्काइडो भन्दा धेरै फरक छ। तोहोकु क्षेत्रमा जापानमा चार asonsतुहरू एकदम स्पष्ट रूपमा उपस्थित छन्।
यो तातो गर्मी को समयमा, पारंपरिक गर्मी चाड यहाँ र त्यहाँ तोहोकु क्षेत्र मा आयोजित गरिन्छ। तोहोकु व्यक्ति यी परम्परागत घटनाहरूलाई राख्छन् र रमाउँदछन्। यदि तपाइँ ग्रीष्म Japanतुमा जापान जानुहुन्छ भने, किन टोहोकु क्षेत्रमा जापानको अद्भुत ग्रीष्म festivalतु भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुभएन।
ग्रीष्म festivalतुमा म सिफारिस गर्न चाहन्छु अओमोरी प्रान्तमा नेबुटा महोत्सव। यो अगस्तमा Aomori शहर र हिरोसाकी शहर मा आयोजित छ। यस फेस्टिवलको बारेमा मैले निम्न लेखमा प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसैले कृपया यदि तपाईंलाई आपत्ति छैन भने कृपया यो लेख छोड्नुहोस्।
>> नेबुटा महोत्सवको विवरणहरूको लागि, कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
शरद Toतुमा तोहोकु
यदि तपाईं शरद inतुमा तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, धान यहाँ बढ्छ र त्यहाँ, तपाईं धेरै धनी वातावरण महसुस गर्नुहुनेछ। तोहोकु क्षेत्र जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने धान उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। तोहोकु मानिसहरूले शरद riceतुमा चामल फसल गर्दछन् र भगवान र बुद्धलाई तिनीहरूको कृपाका लागि धन्यवाद दिन्छन्।
यदि तपाईं तोहोकु क्षेत्रको पर्वतीय क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने, तपाईं अधिक स्पष्ट रातो पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मैले विशेष रूपमा सिफारिस गरेको स्थान हेर्नको लागि ओइरस स्ट्रिम हो (अओमोरी प्रान्त)। यहाँ शरद पातहरु जापान मा विशेष गरी अद्भुत छ। Oirase धारा को लागी, मैले निम्न लेख मा परिचय दिए, त्यसैले कृपया यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने रेफर गर्नुहोस्।
>> Oirase स्ट्रिम को विवरण को लागी, कृपया यो लेख को संदर्भ
चारकोल ग्रील्ड किरीटानपो (चामल स्टिक), अकिता, टोहोकु, जापानको स्थानीय खाना = शटरस्टक
टोहोकु क्षेत्रमा धेरै परम्परागत स्थानीय भोजनहरू छन्। कृपया तपाइँको भ्रमण गरिएको भूमिमा यी भाँपाहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यी स्थानीय खाना टोकियोमा आधुनिक रेस्टुरेन्टहरूको खाना भन्दा बढी देहदार हुन सक्छ। जे होस्, यो तपाइँको यात्रा को एक अद्भुत स्मृति हुनेछ।
क्षेत्रीय खाना म सिफारिश गर्न चाहान्छु विशेष गरी अकिता प्रान्तमा "किरीटानपो" हो। माथीको चित्रमा देखिए जस्तै ताजा पकाइएको भात पीसएर बनाइएको यो काठको आकारको केक हो। कृपया यो मिसोको साथ थप्नुहोस् र यसलाई बेक गर्नुहोस्। यो धेरै सुवासिक र स्वादिष्ट हुन्छ। यसलाई तातो भाँडो पकाउनेमा उत्तम हुन्छ!
तोहोकु क्षेत्रमा, मार्च ११, २०११ मा, ग्रेट इस्ट जापान महान भूकम्प भयो, र धेरै व्यक्तिको मृत्यु भयो। हाल, प्रभावित क्षेत्रका मानिस पुननिर्माणको लक्ष्यका लागि कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। तोहोकुका मानिसहरू धेरै गम्भीर र बिरामी छन्। मैले यो ठूलो भूकम्पको बारेमा निम्न लेख लेखेको थिएँ। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने यस पृष्ठमा ड्रप गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई मार्च ११, २०११ मा ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पको बारेमा याद छ? भूकम्प र सुनामीमा १ hit,००० भन्दा बढी मानिस मरे जसले जापानको टोहोकु क्षेत्रमा प्रहार गरे। जापानीहरु को लागी, यो एक त्रासदी हो जुन कहिले भुल्दैन। हाल तोहोकु क्षेत्र द्रुत पुनर्निर्माण हुँदैछ। खुल्ला ...
अब, तोहोकु क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण गर्नुहोस्। तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ?
Oorise नदी को शरद र Col्ग, Aomori प्रान्त जापान मा स्थित = शटरस्टक
अओमोरी तोहोकु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र हो। यहाँ वास्तवमा धनी प्रकृति छन्। यसबाहेक, यस क्षेत्रमा परम्परागत चाडहरू पनि रमाईलो छ।
अओमोरी प्रान्त जापानको होन्शुको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। यो क्षेत्र धेरै चिसो छ र प्रशान्त साइड बाहेक बर्फ हिउँ धनी छ। अझै, अओमोरीले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। त्यो किनभने त्यहाँ धेरै पर्यटन आकर्षणहरू जस्तै हिरोसाकी कासल र ओइरासे स्ट्रिम छन्, जुन जापानका प्रतिनिधि हुन्। यो ...
इवाटे प्रान्तमा एक हेराइजुमी नामको दर्शनीय स्थल छ जुन विश्व सम्पदा साइटको रूपमा दर्ता गरिएको छ। विगतमा त्यहाँ भव्य राजधानी हुन्थ्यो। मार्को पोलोले भने, "सुदूर पूर्वमा सुनौलो देश छ।" भनिन्छ कि यो Hiraizumi को बारे मा हुन सक्छ।
१ 13 औं शताब्दीको अन्तमा, इटालियन व्यापारी मार्को पोलोले युरोपका मानिसहरूलाई सुदूर पूर्वमा सुनौलो देश भएको कुरा बताए। वास्तवमा त्यतिबेला सुन जापानमा उत्पादन भइरहेको थियो। मार्को पोलोले कसैबाट सुनेको जस्तो देखिन्छ कि इवाटे प्रान्तको हीराइजुमी एक धेरै हो ...
नामहागे मास्क, परम्परागत विशाल मास्क - अकिता पूर्णताको पुरानो संस्कृति, तोहोकु, जापान
अकिता प्रान्त जापानको समुद्री किनार क्षेत्र हो र धेरै परम्परागत घटनाहरू र पुरानो समयबाट क्षेत्रीय खाना बाँकी छ। यदि तपाईं यस क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने, तपाईं समय वृद्धको जापानमा स्लिप गर्न सक्नुहुनेछ।
अकिता प्रान्तमा त्यहाँ धेरै "पुरानो जापानी" छन्! उदाहरणको लागि, ओगा प्रायद्वीपको ग्रामीण गाउँहरूमा, पुरुषहरू नामहागे भनिने राक्षसहरूको पोशाकमा वार्षिक कार्यक्रमहरू अहंकारी बच्चाहरूलाई अझै पनि वंशानुगत रूपमा डराउँछन्। काकुनुदानमा एउटा अद्भुत समुराई निवास छोडियो। तपाईं किन पुरानो जापानको आनन्द लिनुहुन्न ...
प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित, मियागी प्रान्त तोहोकु क्षेत्रको मध्य क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको समुद्र जताततै सुन्दर छ। मियागी प्रान्त २०११ को ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍यायो, तर अब यस क्षेत्रका मानिसहरु पुनर्निर्माणको लागि अग्रसर छन्।
यदि तपाई जापानको टोहोकु क्षेत्रमा पहिलो पटक यात्रा गर्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि पहिले मिआगी प्रान्तमा जानु राम्रो उपाय हो। मियागी प्रान्तमा सेन्दै शहर छ, तोहोकुको सबैभन्दा ठूलो शहर। तपाईं यस सुन्दर शहरको तोहोकु भरि नै स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। मत्सुशिमा ...
माउण्ड जाओ रेंज, जाओ, यामागाता, जापान = शटरस्टकमा हिउँ राक्षसहरूको रूपमा पाउडर हिउँसँग सुन्दर फ्रिजन वन कभर गरिएको
यदि तपाइँ जाडोमा यामगाता प्रान्तमा जानुहुन्छ भने, कृपया जावो स्की रिसोर्ट सबै माध्यमबाट हेर्नुहोस्। यस स्की रिसोर्टमा त्यहाँ धेरै हिउँ राक्षसहरू छन्, जुन तपाईं माथि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ! तपाईं तिनीहरूलाई gondola भित्रबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ।
यस पृष्ठमा, म जापानको तोहोकु क्षेत्रको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित यामगाता प्रान्तको परिचय दिनेछु। यहाँ धेरै पर्वतहरू छन्। र जाडोमा, धेरै हिउँ पर्दछ। माथिल्लो तस्विर माटो हो। जाओको जाडो परिदृश्य। कृपया हेर्नुहोस्! रूखहरू हिउँमा बेर्छन् र हिउँ राक्षसहरूमा परिणत हुन्छन्! ...
"फुकुशिमा" नाम सम्पूर्ण पूर्वी जापान भूकम्पको समयमा भएको आणविक दुर्घटनाका कारण विश्वभर परिचित भयो। त्यस समयमा, एक खराब छवि फैलियो, तर वास्तविक फुकुशिमा एक अद्भुत ठाउँ हो। आइजुवाकामात्सु शहरमा तपाईं नेत्रहीन दृश्यहरू वसन्त inतुमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि जापानी मानिसहरु एक शब्द मा फुकुशिमा प्रान्त को अभिव्यक्त गर्छन्, धेरै व्यक्तिले "धैर्य" शब्दको नाम राख्नेछन्। फुकुशिमा प्रान्तका व्यक्तिहरूले धेरै समस्याहरू अनुभव गरिसकेका छन् र उनीहरूलाई परास्त गरेका छन्। हालसालै, ग्रेट ईस्ट जापान भूकम्प (२०११) सँगै परमाणु उर्जा संयंत्र दुर्घटनाका कारण अन्धकार छवि संसारमा फैलियो। ...